သတ္တုဗေဒအဘို့ကြိုထားသော Slag Process ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ရောစပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် Ladle လွှဲပြောင်း
ဘိလပ်မြေ & သတ္တုတွင်း Machinery
Rotary လညျးမီးဖိုနှင့် Rotary လညျးမီးဖိုများအတွက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
သတ္တုဗေဒ slag ဘို့ကြိုထားသော Slag Process ကိုတပ်ဆင်ခြင်း ...
ရောစပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Matte ladle အတွက် Ladle လွှဲပြောင်း
တိုက်တေနီယမ် electrodeposition စည်
ladle Casting ရောစပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် Ladle လွှဲပြောင်း
လူမီနီယမ် Electrolyzer အသီးအနှံမှိုမျိုးစေ့ကြဲပန်
ကို Hydro-ဆလင်ဒါနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ Chuck
ladle ဇ Casting ရောစပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် Ladle လွှဲပြောင်း ...
ယင်းသတ္တုနှင့်အရည်ပျော်နယ်ပယ်များတွင်တစ်ဦး ladle မြင့်မားတဲ့အပူချိန်သတ္တုသယ်သို့မဟုတ်သွန်းသောသတ္တုသွန်းလောင်းရန်အသုံးပြုအိုးသည်။ အများအားဖြင့်ကသုံးခုကွဲပြားခြားနားသော ladle ချ. ဥပမာအမျိုးအစားများ, လွှဲပြောင်း ladle, ကုသမှု ladle ရှိပါတယ်။ Ladles ပုံမှန်အားဖြင့်မိမိတို့၏လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ခြင်းဖြင့်ထက်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစားအားဖြင့် rated နေကြသည်။ ladle Casting: အသတ္တုများပုံသွန်းထုတ်လုပ်ရန်မှိုသို့သွန်းသောသတ္တုသွန်းလောင်းရန်အသုံးပြုတဲ့ ladle ။ လွှဲပြောင်း ladle: anot မှတဦးတည်းဖြစ်စဉ်ကိုကနေသွန်းသောသတ္တု၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုလွှဲပြောင်းဖို့အသုံးပြုတဲ့ ladle ...
In the metallurgical and melting fields,aladle isavessel used to transport high temperature metal or pour out molten metals. Usually it has three different types, for example, ladle ချ., transfer ladle, treatment ladle. Ladles are normally rated by their working capacity rather than by their physical size.
ladle Casting: အဆိုပါသတ္တုများပုံသွန်းထုတ်လုပ်ရန်မှိုသို့သွန်းသောသတ္တုသွန်းလောင်းရန်အသုံးပြုတဲ့ ladle ။
ladle လွှဲပြောင်း: တယောက်ကိုတယောက်ဖြစ်စဉ်ကိုကနေသွန်းသောသတ္တု၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုလွှဲပြောင်းဖို့အသုံးပြုတဲ့ ladle ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးလွှဲပြောင်း ladle တစ်ခုကျင်းပနိုင်ရန်မီးဖိုထဲဒါမှမဟုတ် Auto-လောင်းယူနစ်ဖြစ်စေမယ့်မူလတန်းအရည်ပျော်မီးဖိုထဲကနေသွန်းသောသတ္တုလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ကုသမှု ladle: သွန်းသောသတ္တုအချို့ကိုရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ ladle အတွင်းအရပ်ဌာနကိုယူမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ ladle ။ ပုံမှန်ဥပမာ ladle သို့အမျိုးမျိုးသောဒြပ်စင်များ၏များအပြင်အားဖြင့်ကျဇယားသံမှသွန်းသံပြောင်းဖြစ်ခြင်း။
ကျနော်တို့ ladles အောက်ပါစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆင်တူဖြစ်သော Cast ကိုသံမဏိကနေလုပ်နေကြတယ်သင်လိုအပ်သောအဖြစ်ကျနော်တို့ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ် CSM ။
ASTM တစ်ဦးကအသက် 27
JIS ဘီ G7821: 2000
က ISO 3755: 1991
ယခင်: လူမီနီယမ် Electrolyzer အသီးအနှံမှိုမျိုးစေ့ကြဲပန်
လူမီနီယမ် Electrolyzer အသီးအနှံမှို, S ကို ...
ရောစပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် Ladle လွှဲပြောင်း ...
အဘို့ကြိုထားသော Slag Process ကိုတပ်ဆင်ခြင်း ...
လူမီနီယမ် Electrolyzer anode သံမဏိ ...
No.3500, XiuPu လမ်း, 201315, ရှန်ဟိုင်း